यौन स्वास्थ्य र स्वस्थ सम्बन्ध | USAHello | USAHello
यौन स्वास्थ्य र स्वस्थ सम्बन्ध समग्र स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छन्. यौन स्वास्थ्य जानकारी जस्तै यौनजन्य रोगहरू अलग्गै रूपमा विषयहरू पनि समेट्छ, राम्रो सम्बन्ध भएको, र जन्म नियन्त्रण.
यौन स्वास्थ्य विषयहरूको बारेमा कुरा गर्न गाह्रो हुन सक्छ. तपाईं सेक्स वा स्वस्थ सम्बन्धको बारेमा पराई कुरा विश्वास गर्छ कि एक समाज आउन सक्छ स्वीकार्य छैन. तर, अमेरिकामा, तपाईं आफ्नो मुख्य डाक्टर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ (आफ्नो PCP) तपाईं कुनै पनि यौन स्वास्थ्य समस्या बारे. तिनीहरूले तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ, मदत गर्न सक्छ जसले वा स्वास्थ्य पेशेवर अर्कै सिफारिश गर्न सक्छन्.
यहाँ यौन स्वास्थ्य बारे आफूलाई शिक्षित केही तरिकाहरू छन्:
योजना आमाबाबु देश भर मान्छे को यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्न समर्पित छ कि संगठन हो. तपाईं योजना Parenthoods देश भर हो जो धेरै यौन स्वास्थ्य केन्द्र को एक भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ, तपाईं कुनै पनि यौन स्वास्थ्य-सम्बन्धित प्रश्नहरूको बारेमा एक चिकित्सा पेशेवर बोल्न सक्छन्. तपाईं पनि धेरै बारे आफूलाई शिक्षित आफ्नो वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ यौन स्वास्थ्य शीर्षकहरू.
एलिस सोध्नुहोस् जानुहोस् मान्छे स्वास्थ्य समस्याहरू सम्बन्धित प्रश्नहरू मा पठाउन सक्नुहुन्छ जहाँ एक वेबसाइट, यौन स्वास्थ्य र सम्बन्ध सहित. पुरानो जवाफ संकलित र प्रकाशित छन्, त्यसैले तपाईं विगतका प्रश्नहरूको जवाफ मार्फत पढ्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि आफ्नो आफ्नै अनुरोध गर्न सक्छ.
यो कामुकता शिक्षा स्रोत केन्द्र शरणार्थी दर्शक लागि विशेष लिखित यौन स्वास्थ्य विषय मा संसाधन को एक नम्बर छ.
अर्को व्यक्तिसँग एक स्वस्थ र सुखी सम्बन्ध राख्दा, यस्तो पति वा पत्नीको रूपमा, आफ्नो जीवन मा आनन्द को धेरै ल्याउन सक्छ. एक सम्बन्ध कठिन समयमा बल र भावनात्मक समर्थन को स्रोत हुन सक्छ र यो खुसी समयमा आफ्नो आनन्द थप्न सक्नुहुन्छ.
को कामुकता शिक्षा स्रोत केन्द्र मा, तपाईं बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ साझेदार बीच सम्बन्ध. योजना आमाबाबु पनि एक बारे आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी छ स्वस्थ सम्बन्ध.
जब कोही आफ्नो पति वा पत्नी दुख्छ, प्रेमिका वा प्रेमी, अभिभावक वा बच्चा, वा आफ्नो परिवारमा कुनै पनि अन्य व्यक्ति, कि "घरेलु हिंसा" छ।
घरेलु हिंसा को संकेत
घरेलु हिंसा शारीरिक हानि हुन सक्छ, भावनात्मक हानि, वा दुवै. को राष्ट्रिय घरेलु हिंसा हटलाइन वेबसाइट तपाईंको साझेदार हो भने तपाईं दुरुपयोग पीडित हुन सक्छ भन्छन्:
तपाईं सही केहि पनि कहिल्यै गर्न सक्छन् भनेर बताउँदा
आफ्नो मित्र को डाह देखाउँदै र समय टाढा खर्च
तपाईंले राखन वा देखेर साथी वा परिवारका सदस्यहरूले तपाईंले निरुत्साहित
अपमानजनक, demeaning वा राख्नु-चढाव तपाईंलाई shaming
घरपरिवारको बिताएको हरेक मुद्रा नियन्त्रण
खर्च लागि पैसा दिन आफ्नो पैसा लिएर वा इन्कार गर्न
तपाईं देख वा तरिकामा अभिनय तपाईं तर्साउन कि
तपाईं देख्न गर्ने नियन्त्रण, तपाईं जहाँ जान, वा तपाईं के
तपाईंको आफ्नै निर्णय तपाईंले रोक्दैछ
तपाईं खराब आमाबाबु हुनुहुन्छ भनेर बताउन वा हानि वा लिन छोराछोरीलाई टाढा गर्न खतरा
काम वा स्कूल उपस्थित तपाईं रोक्दैछ
चोट वा आफ्नो पाल्तु जनावर र मार्न आफ्नो सम्पत्ति नष्ट वा खतरा
बन्दुक तपाईंलाई Intimidating, चक्कु वा अन्य हतियार
तपाईं चाहेको बेला सेक्स छ तपाईं Pressuring गर्न, वा तपाईंले सहज हुनुहुन्न यौन कुराहरू के
लागूपदार्थ वा रक्सीको प्रयोग तपाईं Pressuring गर्न
म घरेलु हिंसा बारेमा के गर्न सक्छ?
तपाईं स्वस्थ सम्बन्ध छैनन् साथीहरू पालन र यदि तपाईंलाई लाग्छ कि उनीहरूको साझेदार तिनीहरूलाई चोट छ, त्यहाँ मद्दत उपलब्ध छ. तपाईं वा अरू कसैले हानि भइरहेको छ भने, वा हानि भइरहेको एक तत्काल जोखिममा, तपाईं प्रहरी कल गर्न सक्छन्.
एक आश्रय जाने
एक घरेलु हिंसा आश्रय तपाईं अस्थायी यदि तपाईंले अपमानजनक साझेदार छोड्न खोज्नुभएको गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ जहाँ एक ठाउँमा छ. तपाईं आफ्नो घर को बाहिर प्राप्त गर्न भने चाँडै सुरक्षित रहन गर्न, एक घरेलु हिंसा आश्रय तपाईं को लागि एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ. एक आश्रय पाउन ती अनुभव घरेलु हिंसा लागि.
को हटलाइन कल
1-800-799-7233 को को फोन नम्बर छ राष्ट्रिय घरेलु हिंसा हटलाइन. फोन नम्बर संचालित छ 24 घण्टा एक दिन. तपाईँ मद्दत लागि हटलाइन कल गर्न सक्छन्.
यौनजन्य रोगहरू (STDs)
STDs कहिलेकाहीं यौनजन्य संक्रमण भनिन्छ (STIs). तिनीहरूले यौन सम्पर्क मार्फत पारित गर्दै छन् संक्रमण. सुरक्षित सेक्स अभ्यास, कंडोम प्रयोग सहित, तपाईं एक एसटीडी करार को आफ्नो जोखिम कम गर्न सक्छ सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो. तपाईं एक एसटीडी हुन सक्छ विचार भने, तपाईं परीक्षण गर्न सक्छन् त बनाउन तपाईं आफ्नो डाक्टर कुरा निश्चित.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा साधारण STDs तीन छन्:
योजना आमाबाबु यी र अन्य STDs जानकारी छ. मा बहुसांस्कृतिक एचआईभी र hepatitis सेवा, तपाईं विभिन्न STIs बारेमा स्रोतहरू पाउन सक्नुहुन्छ, सबै भाषामा अनुवाद.
तिनीहरूले छोराछोरीलाई जन्म नियन्त्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हुँदा नियन्त्रण गर्न चाहने यौन सक्रिय महिला र पुरुष (पनि भनिन्छ गर्भनिरोधक) गर्भावस्था जोगिन. तपाईं विभिन्न कारक को एक नम्बर भर पर्न सक्छ के जन्म नियन्त्रण विकल्प सही छ, आफ्नो उमेर जस्ता, आफ्नो चिकित्सा इतिहास, र कि वा तपाईं भविष्यमा छोराछोरीलाई चाहनुहुन्छ.
महिलाका लागि गर्भनिरोधक विभिन्न पक्षबाट आउँछ, एक गोली सहित, एक इंजेक्शन, वा सानो उपकरण महिलाको शरीर सम्मिलित सकिन्छ कि IUD भनिन्छ. मानिसहरू लागि गर्भनिरोधक यस्तो कंडोम धेरै पक्षबाट आउँछ, abstinence, वा पुरुष नसबंदी. थप पढ्नुहोस् आफ्नो जन्म नियन्त्रण विकल्प.
तपाईं जन्म नियन्त्रणमा चासो हो भने, तपाईं थप जानकारी को लागि आफ्नो डाक्टर कुरा गर्नुपर्छ. आफ्नो डाक्टर सहयोग गर्न असमर्थ छ भने, एक स्वास्थ्य केन्द्र तपाईं को लागि सही जन्म नियन्त्रण विकल्प बारे योग्य डाक्टर र नर्स बाट मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ खोज्न. तिमी सक्छौ FindHello मा एक समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र फेला. वा तपाईं एक जन्म नियन्त्रण क्लिनिक र अन्य जन्म नियन्त्रण सेवाहरू खोजी. अर्को विकल्प एक जान छ योजना आमाबाबु क्लिनिक तिम्रो नजिक.